शीर्ष5युरोपमा व्यस्त ट्रेन स्टेशनहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > शीर्ष5युरोपमा व्यस्त ट्रेन स्टेशनहरू
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 20/11/2020)
ट्रेन यात्रा सबैभन्दा सामान्य तरीका हो युरोप मा यात्रा. त्यसैले, विश्वका सब भन्दा व्यस्त ट्रेन स्टेशनहरू युरोपमा र कहिलेकाँही हुन्छन्, संसारमा.
चरम घण्टामा भीडको बावजुद, शीर्ष5युरोपमा व्यस्त ट्रेन स्टेशनहरू तपाईको यात्रामा आवश्यक पर्ने कुनै पनि चीजको लागि डिजाइन गरिएको हो.
युरोपको हाम्रो यात्रा अनुसरण गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कुन रेल स्टेशन यूरोपको सबैभन्दा व्यस्त हो. तपाईले पत्ता लगाउन लाग्नु भएको छ कि तपाई भिभाल्डी कहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ र कुन रेल स्टेशनमा नदीको किनारमा तपाई रेलबाट इटाली जाने कुराको लागि प्रतिक्षा गर्न सक्नुहुन्छ.
1. Gare du Nord ट्रेन स्टेशन, पेरिस
पेरिसमा Gare du Nord (फ्रेन्चमा गेयर शब्दको अर्थ ट्रेन स्टेशन हो, फ्रेन्चमा नर्ड उत्तर हो) युरोपको सबैभन्दा व्यस्त ट्रेन स्टेशन हो. त्यहाँ नजिक छन् 700,000 यात्रुहरू जुन दैनिक रेल स्टेशनबाट जान्छन्. रेल स्टेशन नजिकै अवस्थित छ 10th पेरिस को उत्तर मा arrondissement, यति धेरै यात्रीहरू पेरिसवासी हुन्. मात्र 3% ट्रेनको यात्रुहरू पर्यटक हुन् जो बेलायत बाट आउँछन् वा द्वारा युके हुन्छन् Eurostar रेल.
युरोपमा सबैभन्दा व्यस्त ट्रेन स्टेशन निर्माण गरिएको थियो3वर्ष, बीच 1861 र 1864. आर्किटेक्ट डिजाइन9उल्लेखनीय मूर्तिहरू जसले रेल स्टेशन भित्र भित्र र 23 स्टेसनको अनुहारमा मूर्तिहरू सजाउँछन्. मूर्तिहरूले मुख्य यूरोपीय शहरहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन रेल पेरिसमा जोड्छ.
उल्लेखनीय रेल स्टेशनलाई बर्षमा दुई पटक विस्तार गरिएको थियो र यात्रु र रेल लाइनहरूको बढ्दो संख्याको कारण फेरि विस्तार हुने आशा गरिन्छ।.
पेरिस-नोर्ड उत्तरी फ्रान्स र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूको लागि ट्रेन स्टेशन हो, उदाहरणका लागि, जर्मनी, लन्डन, र एम्स्टर्डम. यसरी, यो व्यस्त ट्रेन स्टेशन तपाइँको लागि सबै यात्रा आवाश्यक प्रदान गर्दछ फ्रान्स मा छुट्टिहरु. त्यहाँ पसलहरु छन्, एक पर्यटक सूचना केन्द्र, कफी पसल, र ब्यागेज लॉकरहरू यदि तपाईं पेरिसमा केही घण्टा आरामसंगत अन्वेषण गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंको ट्रेन प्रस्थान हुनु अघि.
2. ह्याम्बर्ग केन्द्रीय स्टेशन, जर्मनी
धेरै 500,000 यात्री ह्याम्बर्ग Hbf बाट हुँदै जान्छन् (Hbf Hauptbahnhof मा एक सर्टकट हो जो केन्द्रीय स्टेशन मा अनुवाद) जर्मनी मा ट्रेन स्टेशन. यसरी, यो युरोप मा दोस्रो व्यस्त ट्रेन स्टेशन हो.
रेल स्टेशन निर्माण गरिएको थियो4वर्षहरू र आर्किटेक्ट हेनरिक रेइनहार्ड र जर्ज सबेनगथले यसलाई डिजाइन गरे. रेल स्टेशन खोलिएको थियो 1906 र भित्र 1991 उत्तरी पुलमा शपिंग सेन्टर थपियो, जहाँ रेष्टुरेन्टहरू छन्, कियोस्क, एक फार्मेसी, र सेवा केन्द्रहरू.
यदि तपाइँ योजना गर्दै हुनुहुन्छ रेल यात्रा जर्मनीमा, तपाईं शास्त्रीय संगीतको मज्जा लिन सक्नुहुन्थ्यो. त्यसैले, जब तपाईं अन्तिम मिनेट स्मृति चिन्हको लागि किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा आवश्यक, र खानको लागि टोक्दै, तपाइँ भिवाल्डीका चार listenतुहरू सुन्न र मज्जा लिन सबैलाई स्वागत छ.
3. ज्यूरिख एचबी केन्द्रीय रेलवे स्टेशन, स्विट्जरल्याण्ड
स्विजरल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो ट्रेन स्टेशन ज्यूरिखमा छ. ज्युरिख एचबी (HB Hbf जस्तै छ र यसको अर्थ होप्टबाह्होन्फ = केन्द्रीय स्टेशन) रेल स्टेशन यूरोप मा व्यस्त रेलवे स्टेशनहरु मध्ये एक हो. व्यस्त स्विस ट्रेन स्टेशन स्विजरल्याण्डलाई देश भरिका शहरहरू र छिमेकी देशहरूसँग जोड्दछ. छन् 13 प्लेटफार्म र 2,915 रेलहरू जर्मनीको लागि प्रस्थान, इटाली, फ्रान्स, र अस्ट्रिया दैनिक. त्यसैले, ज्युरिख रेलवे स्टेशन विश्वको सबैभन्दा व्यस्त ट्रेन स्टेशनहरू मध्ये एक हो.
अर्को कुरा जुन यो रेल स्टेशनलाई युरोपको सबैभन्दा व्यस्त बनाउँछ त्यो त्यहाँ वास्तवमै हस्टलिंग छ & स्टेशन भित्र शहर हलचल हलचल. उदाहरण को रुपमा, तपाइँको यात्रा को समय मा निर्भर गर्दछ, तपाईं सक्छ क्रिसमस बजारको आनन्द लिनुहोस् and street parades.
ज्यूरिख रेल स्टेशन ज्यूरिखको ओल्ड टाउनमा अवस्थित छ. को सिहल नदी स्टेशन बाट जान्छ, यसको मतलब यो छ कि त्यहाँ माथि र तल रेल ट्र्याकहरू छन्.
पनि, ज्यूरिख ट्रेन स्टेशन स्विजरल्याण्डलाई फ्रान्समा जोड्दछ, जर्मनी, इटाली, चेक गणतन्त्र, र अस्ट्रिया.
हाम्रो सूचीमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन स्टेशनहरू जस्तै, त्यहाँ एउटा मुद्रा विनिमय कार्यालय, टिकट कार्यालय, सामान भण्डारण, पर्यटक सूचना केन्द्र, र ज्यूरिखको ट्रेन स्टेशनमा Wi-Fi इन्टरनेट. त्यसैले, यदि तपाइँ तपाइँको लागि केहि प्याक गर्न बिर्सनुभयो भने स्विजरल्याण्ड मा छुट्टी, चिन्ता नगरिकन किनभने स्टेशनमा तपाईले सबै कुरा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ.
4. रोम टर्मिन रेल स्टेशन, इटाली
रोम रेलवे स्टेशन हाम्रो शीर्ष फिचर गर्दछ5युरोपका व्यस्ततम रेल स्टेशनहरू यात्रुहरूको उल्लेखनीय वार्षिक संख्याका कारण सूचीमा सेवा गर्दछन्. सम्म 150 मिलियन यात्रीहरू व्यस्त रेल स्टेशन प्रत्येक वर्ष आउँछन् र प्रस्थान गर्छन्.
रोम रेलवे स्टेशन रोम टर्मिनी लाई इटालीका अन्य शहरहरू मार्फत जोड्दछ Trenitalia. साथै, रेल स्टेशन इटाली को माध्यम बाट छिमेकी देशहरु लाई जोड्छ 29 प्लेटफार्महरू. उदाहरणका लागि, रोम टर्मिनी बाट, तपाईं स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, जर्मनीमा म्युनिक, र अष्ट्रिया मा भियना.
रोम रेलवे स्टेशनसँग यात्रुलाई युरोप वा इटालीको यात्राको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा हुन्छ. त्यसैले, प्रवेश हलमा, तपाईंले एक मुद्रा विनिमय कार्यालय पाउनुहुनेछ, रेस्टुरेन्ट, ट्याक्सी सेवाहरू, र लगेज सुविधा. सबै कुरा योजना गरीएको छ र तपाईंको यात्राहरू सकेसम्म सहज रूपमा जानको लागि डिजाइन गरिएको हो.
5. म्यूनिख Hauptbahnhof ट्रेन स्टेशन, जर्मनी
आज त्यहाँ छन् 32 युरोप मा व्यस्ततम ट्रेन स्टेशन मध्ये एकमा प्लेटफर्महरू. साथै, त्यहाँ अधिकांश जर्मनीको लागि इंटरसिटी र यूरोसिटी रेल सेवाहरू छन्, र इटाली, फ्रान्स, स्विट्जरल्याण्ड, र अस्ट्रिया. मुन्चेन हाउपबाहह्नोह रेलवे स्टेशनबाट तपाईं बर्लिन यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ, फ्रैंकफर्ट, जर्मनीमा भियना वा इटलीमा भेनिस र रोमको ट्रेन लिनुहोस्, पेरिस, र ज्यूरिख.
वरिपरि 127 मिलियन यात्रुहरु प्रत्येक बर्ष म्यूनिख रेल स्टेशनको भ्रमण गर्छन्. This outstanding number makes the station one of the busiest train stations in Europe.
माथि उल्लेखित अन्य ट्रेन स्टेशनहरू जस्तै, म्यूनिख रेल स्टेशनले यात्रुहरूलाई धेरै सुविधा र सेवाहरू प्रदान गर्दछ. उदाहरण को रुपमा, तपाईं खाना पसलहरू पाउन सक्नुहुन्छ, उपहार पसल, र बच्चाहरु पनि & रेल स्टेशन मा युवा संग्रहालय.
स्टेशन बाहिर, तपाईंले U-Bahn भूमिगत मेट्रो पाउनुहुनेछ, ट्याक्सी सेवाहरू, र ट्राम लाइनहरू जुन तपाईंलाई कुनै पनि ठाउँमा म्यूनिखमा लैजान्छ.
चाहे तपाईं यूरोप भर यात्रा गर्न क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन खोज्दै हुनुहुन्छ, सँग तपाईंको ट्रेन टिकट अर्डर गर्नुहोस् एक ट्रेन सेव. हामी तपाईंलाई राम्रो दाममा उपलब्ध उत्तम टिकट विकल्पहरू फेला पार्न मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “शीर्ष5युरोपमा व्यस्त ट्रेन स्टेशनहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbusiest-train-stations-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
BusiestTrainStations रेल स्टेशन traintravelaustria traintravelfrance traintravelgermany